Heritage: Sida la doonayo in loo boobo doorashada 2020, waxaa i qarso noqon doonta boobkii 2016 | Warkii.com
Home warkii Heritage: Sida la doonayo in loo boobo doorashada 2020, waxaa i qarso...
Heritage: Sida la doonayo in loo boobo doorashada 2020, waxaa i qarso noqon doonta boobkii 2016
“Guddiga la yiri doorasho ayay qabanayaan waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan xafiiska Madaxweynaha iyo midka Ra’iisul Wasaaraha, saraakiil xafiisyada madaxda dowlad goboleedyada, diblomaasiyiin, saraakiil amni iyo shaqaale dowladeed,” ayaa lagu yiri warbixintan Machadka Heritage oo dheer.
“Magacaabistaasi waxa ay ka hor imaanaysaa heshiiskii bishii September ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu doorashada ka galeen, kaas oo tilmaamayey in dhinac kastaa uu magacaabi doono xubno dhexdhexaad ah oo dadka Soomaaliyeed kalsooni ku qabi karaan. Dadka hadda guddiyaasha doorashada loo magacaabay ma ahan oo kaliya inay yihiin dad madaxda kala duwan ku kala xiran, balse waa dad guddiyadaas loogu daray oo kaliya inay ka shaqeeyaan maslaxadda madaxda magacaabatay ee heer federal ama heer dowlad goboleed,” ayaa lagu yiri.
“Waxaa jira tilmaamo badan oo muujinaya in madaxda federaalka iyo kuwa gobolladu ay doonayaan inay mar kale doorashada u musuqmaasuqaan sidii doorashadii 2016-dii loo musuqay, iyagoo quud darraynaya inay guul ku gaari karaan boobka doorashada,” ayaa lagu yiri warbixintan.
“Haddaba, mar kale ayaan qaylo dhaan ka diraynaa ku noqoshada waddadii hungada ee masuul kasta oo federaalka ka taliya ama gobollada xukuma ay isku dayayeen inay qabtaan doorasho iyaga ku jaan go’an,” ayaa lagu yiri warbixinta Machadka Heritage.
“Si kale haddii loo yiraahdo, mulkiilayaasha siyaasadda dalka (inta lacagta siyaasadda u isticmaasha) waxay abuureen xaalad cidda doorasho xildhibaan geli karta iyo cidda mid madaxweyne geli kartaba ay iyaga hagaan (maaddaama ay lacag ku xiran tahay) ayna ka macashaan. Oo weliba, haddii musharixiinta baarlamaanka labadiisa aqal ay bixiyaan lacagtaas aadka u badan, badankoodu ma guulaysan doonaan, in kooban ayaana ka soo dhex bixi doonta tartarka musuqa ah, weliba iyagoo qaamaysan, soona diirteen 101 codbixiye oo hadda mindiyahooda sii soofeysanayaa” ayaa lagu yiri.
“Dhab ahaantiina, cidda khasaaraha ugu weyn uu kasoo gaarayo, dad cunnimada xilliga doorashada dhacda oo musuqa iyo laaluushka iyo boobka la xalaalaysto, waa dadka Soomaaliyeed, oo hoggaamiyayaashoodu ay sidaas u dhasheen. Sidaas oo ay tahay, musuqmaasuqu waa hal qayb oo ka mid ah khaladaadka doorashadaan ku gadaaman. Habkaan doorasho ee la qaatay waa mid ka dhar la’ isla xisaabtan, hufnaan iyo korjoogteyn lagu dhawrayo xornimada iyo xalaalnimada doorashada 2020-ka. Badanaa guddiga xallinta khilaafaadka ayaa ahaa mid wixii la isku qabsado loo bandhigo si uu waardiye uga ahaado boobka aan gabbaadka lahayna” ayaa lagu yiri warbixinta Heritage.
Previous articleMadaxweyne ERDOGAN oo lagu dhaliilay garab istaag uu u sameeyay Soomaaliya
Next articleMahdi Guuleed oo tusaale dhacay 2016 ugu jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh
Sheekh Abukar Maqaneey, wasiirkii hore ee arrimaha Diinta iyo Owqaafta ee maamulka HirShabeelle iyo Cabdixakiin Luqmaan, oo ka tirsana safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan...
Dhalinyaro Soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Canada
Maxkamad xukunka ka khafiifisay Nin dad ku laayay Masaajid